आज बडादशैं शुरु, घर घरमा जमरा राखिदैं - GalaxyPati
आज बडादशैं शुरु, घर घरमा जमरा राखिदैं
२०७७ कार्तिक १, शनिबार ०४:०४
वीरगन्ज, १ कार्तिक । आजबाट महान चाड बडादशैं शुरु भएको छ । दशैंको पहिलो दिन आज घरघरमा घटस्थापना गरिँदै छ । घटस्थापनाको उत्तम साइत आज बिहान ११ः४६ मा रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । घटस्थापना गर्दा पूजाकोठा वा दशैं घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ । नवरात्रको पहिलो दिन आज बिहानै नित्य कर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजाकोठा अथवा दशैँघरमा जौ रोपिन्छ । जौको पहेँलो अंकुरण अर्थात् जमरा दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले त्यसलाई विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसितै ग्रहण गरिन्छ । पहेँलो जमरालाई समृद्धिको प्रतीक पनि मानिन्छ । कुल परम्परानुसार कसैले जमरा राख्दा जौसँगै अन्य अन्न पनि रोप्ने गरेका छन् । तर जमरा राख्ने कार्यमा जौबाहेक अरु अन्न रोप्ने शास्त्रीय विधि नभएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतम बताउँछन् । आज दिनभर चित्रा नक्षत्र परेकाले शास्त्रीय वचनअनुसार मध्याह्नकालमा अभिजित् मुहूर्तको साइत घटस्थापनाका लागि दिइएको अध्यक्ष गौतमले बताए । सूर्योदयकालमा प्रतिपदा भएका दिनमा घटस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यतानुसार नै समितिले आजको दिनलाई घटस्थापना भनी निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । घटस्थापनाको दिनदेखि नवरात्र सुरु हुन्छ । नवरात्रभर दुर्गाका तीन रुप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विधिपूर्वक पूजाराधना गरिन्छ । महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्य तथा महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकका रुपमा पूजाराधना गर्ने वैदिककालदेखिको परम्परा छ । नवरात्रको पहिलो दिन दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौंँ दिन स्कन्दमाता, छैटौँ दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्रि, आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजाराधना गर्ने गरिन्छ । दुर्गाका यी नौ रुपलाई नवदुर्गा पनि भन्ने गरिन्छ ।
यसैबीच आज घटनस्थापनाको दिनदेखि घुँईचो लाग्ने शक्तिपीठहरु यसबर्ष सुनसान भएको छ । कोरोना भाईरस संक्रमणको महामारीले बढी भीडभाड हुने धार्मिक स्थलहरुमा प्रवेश निषेध गरिएकोले शक्तिपीठहरुमा भीडभाड कम भएको हो । वीरगन्जको प्रसिद्ध गहवामाई मन्दिरमा आजको दिन बिहानैदेखि भक्तजनहरुको घुँईचो लग्ने गथ्र्यो । यसबर्ष कोरोना भाईरस संक्रमण फैलिने जोखिम रहेको भन्दै प्रशासनले मन्दिरहरु बन्द गरेपछि थोरै संख्यामा भक्तजनहरु मन्दिर पुगेका छन् । मन्दिरको मूलगेट नै बन्द भएपछि श्रद्धालु भक्तजनहरु बाहिरैबाट पूजापाठ र दर्शन गरेर फर्किने गरेका छन् । सरकारले हिजो ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलहरु खोल्न नदिन निर्देशन गरेको छ । कोरोना भाईरस संक्रमण फैलिने जोखम रहेकाले घर घरमै दशै मनाउन आग्रह गरिएपनि सर्वसाधारणले भने सरकारको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै मन्दिरमा पूजाआजा र दर्शनका लागि पुग्ने गरेका छन् ।
यस्तै सप्तरीमा शक्तिपीठ र मन्दिरहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जिल्ला सुरक्षा समिति, सप्तरीले गएराति ११ बजेदेखि आउँदो मङ्सिर ७ गते राति साढे ११ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत आनन्दकुमार ठाकुरले मन्दिरकातर्फबाट गरिने नित्य पूजापाठ बाहेकका अन्य सम्पूर्ण कार्यरगतिविधि हुनरगर्न निषेध गरिएको बताउनुभएको छ । आजदेखि बडादशैँ सुरु भएसँगै शक्तिपीठ तथा मन्दिरमा भीडभाड हुने भएकाले समितिले निषेधाज्ञा लगाएको हो ।